2021 Hainan International Biodegradable Plastics and Application Exhibition obubanjelwe kwindibano yezizwe ngezizwe yaseHannan kunye neziko lemiboniso ukusuka ngoJun. 23. ukuya kuJun 25. 2021. Izinto ezingonakaliswayo zisisityebi kwimekobume yamazwe ngamazwe. Amazwe amaninzi ane-ena ngokusemthethweni...
ngu admin on 21-05-14
Namhlanje, i-CHAMPION igqibe ukulayishwa kwempahla kwiikhonteyina ezi-5 kwimvula enkulu. Le projekthi yeyokuqala i-PC flat sheet / uphahla lwephepha lokuvelisa umgca weprojekthi yentsebenziswano kunye nomthengi waseThai emva kwemigca ye-5 ye-PET sheet extrusion. Lo mgca we-Extrusion wephepha le-PC unokuvelisa ii-4 ezahlukeneyo...
Namhlanje lusuku lokugqibela lwe-Chinaplas 2021. Kodwa abantu abaninzi baseza kubona umboniso. Ngenxa yempembelelo ye-COVID-19, uninzi lwabahlobo bamanye amazwe abakwazi ukundwendwela umboniso. Silapha ukukubonisa umboniso. INGQWELELI ngumvelisi womatshini wokufakelwa....
ngu admin nge 21-04-11
I-34th International Exhibition kwiPlastiki kunye neRubber Industries e-China i-Shenzhen World Exhibition & Centre Centre iya kudibana nawe. I-Zhejiang CHAMPION Plastic Machinery Co., Ltd. iya kuzimasa umboniso ukususela ngo-Apr.13...
ngu admin on 20-08-14
I-20000+ ye-square yeemitha mveliso, ibekwe kunxweme oluhle lwe-TAIHU Lake CHANGXING isixeko. Ekupheleni kukaSeptemba, i-CHAMPION iwugqibile wonke umsebenzi wokufuduka yaza yaqalisa umzi-mveliso omtsha. Siyavuya ukwazisa ukuba igama lenkampani yethu litshintshiwe njenge ZHEJIANG CHA...